'बाउन्सर'को प्रयोग गरेर आफ्नै साथीको हत्या, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
'बाउन्सर'को प्रयोग गरेर आफ्नै साथीको हत्या
सुरुङ्गा, झापा। विर्तामोडमा रहेको ऋद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका सञ्चालक पारसकुमार देवले आफ्नै साथीको हत्या गरेको खुलासा भएको छ।
उनले आफ्नै पसलमा राखेका ‘वाउन्सर’को प्रयोग गरेर देवा ज्वेलर्सका सञ्चालक साजन मुखियाको हत्या गरेको खुलासा भएको हो। गत फागुन २० गतेदेखि बेपत्ता बनेका साजनलाई पारसले विर्तामोडस्थित आफ्नै घरमा पु-याएर हत्या गरेको प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाका विषयमा जानकारी गराएको हो।
प्रहरीले उनीहरुका साथबाट घटनामा संलग्न भएको एक थान स्कुटर र सुनका गहरगहना, सिमसहितका छ थान मोबाइल सेटसमेत बरामत गरेको प्रहरी उपरीक्षक केसी बताए । घटनामा संलग्न अन्य व्यक्ति पनि रहेकाले उनीहरुको खोजी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । हत्यामा संलग्नमध्ये ओलीलाई प्रहरीले तेह्रथुमको संग्रान्ती बजारबाट सोमबार नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।